Ufakelo olutsha oluhlaziyiweyo lomdlalo weSid Meier Railroads! iyahambelana ngoku kwi-macOS | Ndisuka mac
Feral ubhengeze ukuba umdlalo wakhe I-Sid Meier yoololiwe!, umdlalo weklasikhi wesimo seqhinga Ityhefu eyakhutshwa ngo-2006 Windowsihlaziyiwe, yaphuculwa kwaye yakhutshelwa iMac, kubandakanya ukuhambelana ngokupheleleyo nenkqubo entsha ye-MacOS yokusebenza kwe-Apple.
Owandulela uSid Meier Railroad wayengomnye weyona midlalo ithengiswayo yohlobo lwayo, eyaqala ukukhutshwa ngo-1990 phantsi kwegama ITycoon yoLoliwe zamaqonga I-Atari ST kunye ne-MS DOS. Umdlalo ubuswele kakhulu uhlaziyo olutsha lokuzinza kule minyaka imbalwa idlulileyo, ke isibhengezo sanamhlanje siya kuba ziindaba ezimnandi kubalandeli abathembekileyo.
Njengowokuqala ukusuka ku-1990, umbono womdlalo uyafana. Abadlali banikwe umsebenzi wokwakha ubukhosi bakaloliwe ngokusebenzisa iimeko ezi-4 ezahlukeneyo: i-United States esentshona, umntla-ntshona welizwe, iGreat Britain ne-Continental Europe.
«Ukuseka iindlela ezahlukeneyo zorhwebo kunye nezabakhweli, oololiwe abakhethwe nganye, kwaye ubone ukuba yonke into iba njani zezona zinto zinomdla kulo mdlalo. Uthatha isigqibo sokuba uyafuna ukwakha uhlanga oluchumileyo, okanye ngokuchaseneyo, uziqwebele ubutyebi obuninzi.
Ngalo mdlalo, ungaya krwaqu, ukusuka kwiinjini zokuqala zomphunga ukuya koololiwe abakhawulezayo bangoku. I-Sid Meier yoololiwe! luhlobo oluphuculweyo kunye oluhlaziyiweyo lwasentsomini ITycoon yoLoliwe 90. Kukwakho nokukhethwa kwimowudi yabadlali abaninzi ye-LAN ukuze ukwazi ukonakalisa abachasi bakho kunye nokulawula ishishini kaloliwe.
Njengezona mfuno zisezantsi zokudlala, umdlalo ufuna ubuncinci: iMacOS 10.12.4 okanye kamva, iprosesa ye-Intel 1.8 GHz, i-4 GB ye-RAM, 2 GB yediski kunye ne-256 MB yememori yemizobo. Umdlalo uyafumaneka kwi Steam Ngexabiso elikhethekileyo le- € 2.49 kude kube ngoMeyi 29 olandelayo. Umdlalo ukwiphepha le- Ivenkile ye-Mac App enexabiso nge- € 19.99, Ixabiso lokwenyani ngaphandle kokunyuselwa okusinikwa nguSteam kule veki. Ukuba sele uwonwabele umdlalo kwi-Mac yakho, ngokuqinisekileyo uya kubona uhlaziyo olukhoyo kwiVenkile yakho ye-Mac App.
Ngaphandle kwamathandabuzo, umdlalo wokulutha kunye onomdla oya kukuvumela ukuba ungene kwilizwe likaloliwe ngendlela eyodwa, zonke ziphantsi komzobo kunye nesicwangciso-qhinga esenziwe ngoogxa bakaSid Meier.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » Ufakelo olutsha oluhlaziyiweyo lomdlalo weSid Meier Railroads! iyahambelana ngoku kwi-macOS